ZTE si loo Daahfuro Taleefanka Sawirka Sawirka Sawirka Koowaad ee shaashadda | Androidsis
ZTE wuxuu diyaar u yahay inuu hormariyo tiknoolajiyad aad u fara badan oo ilaa maanta, aan lagu soo bandhigin qaabkeedii ugu dambeeyay. Kani waa midka ay ku xiran tahay kamaradda sawir-qaadaha (selfie camera) shaashadda hoosteeda, madax xanuun ku riday injineerada shirkadaha sida Honor, OnePlus, Xiaomi iyo kuwa kaleba, maxaa yeelay waxay soo bandhigtay cilado aad u muuqda oo horumarinteeda ah.
Tiknoolajiyaddan, illaa goor aan fogayn, waxaa ku wargaliyay ilo wareedyo ku dhow dhowr ka mid ah shirkadaha la xusay inay ku guul darreysteen, maaddaama qaar ka mid ah dhibaatooyinka badan ee fulintiisu ay ahaayeen tayada muuqaalka ugu dambeeya ee liita iyo dhalaalka iyo midabbada midab-beelka ah ee aagga shaashadda. meesha kamarada la dhigo ... Waxa ugu fiican ayaa ah inay taasi u muuqato ZTE waxay ku guuleysatay inay xalliso dhibaatooyinkaas, sidaasna u soo jeedinaysa taas Waxay noqon doontaa kii ugu horreeyay ee soo saara moobil leh kamarad sawir leh oo ka hooseysa shaashadda, isla markaana dhowaan.
ZTE wuxuu noqonayaa kii ugu horreeyay ee noo keena mobiil kamarad ka hooseysa shaashadda
Madaxweynaha shirkadda Shiinaha, Ni Fei, isaga oo adeegsanaya akoonkiisa Weibo, ayaa daabacay daabacaadda kamaradda shaashadda ee ZTE A20 5G. Waxaa ku qoran Calaamadda ayaa lagu wadaa inay ku dhawaaqdo taleefankeedii ugu horreeyay ee kamarad oo dhawaan la soo bandhigo.
Ni Fei waxay daaha ka rogtay in taleefankii ugu horreeyay ee adduunka leh kamarad aan la soo bandhigi karin uu ka iman doono shirkadda ZTE
Maamulka sare ma bixin wax sawir ah oo qalab ah; Sidoo kale ma aysan shaacin faahfaahinta weyn ee ku saabsan iyo taariikhda ay soo bixi doonto, sidaa darteed waxaan aad u xiiseyneynaa hal-abuurnimada noocaas ah. Waxa ugu fiican ayaa ah in magaca la shaaciyay, waana sababta aan taas u ogaanay Calanka xiga ee ugu horreeya ee ugu horreeya ee teknolojiyaddan oo kale ah wuxuu noqonayaa A20 5G, taas oo horeyba ugu jirtay gacanta Fei waxayna umuuqataa mid kacsan oo ordaya isla markaana u hamuun qaba inay suuqa si dhaqso leh kudhacdo
Liis ayaa dhawaan lagu arkay Shuruucda Raadiyaha Gobolka Shiinaha (SRRC) ee lagu eedeeyay ZTE A20 5G, oo muujineysa taageeradeeda kooxeed iyo nambarka nambarka 'ZTE A2121'. Tani waxay muujineysaa inay horeyba u sharciyeysay nidaamiyahan, iyo inay horeyba uga sii shahaadoon karaan kuwa kale.
Waxaan sugeynaa barnaamijyada sida TENAA ama 3C si ay noo siiso faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan astaamahooda iyo qeexitaankooda farsamo kahor intaan taleefankan casriga ah lagu dhawaaqin iyo / ama la bilaabin soo saaraha sanadkan, maadaama labada shahaado bixiyeyaasha ay inta badan shaandheeyaan tayada mobilada Shiinaha ee soo socda ka hor iftiin eeg.
Dhinaca kale, markay tahay maalgashiga kamaradda sawir-qaadaha, Visionox ayaa ah shirkadda gacanta ku haysa soo saarista tikniyoolajiyadda “kamarada aan sawir-qaadka lahayn” ee ZTE. Waxay sheeganeysaa inay ku xallisay arrimaha kor ku xusan isku-dar ah qalabka bandhigyada cusub iyo algorithms-ka software-ka, kaas oo mas'uul ka ah hagaajinta xaglaha aragtida iyo yareynta dhalaalka. Si kastaba ha noqotee, waa inaan sugnaa si aan u aragno sida wanaagsan - ama aan ahayn - natiijooyinka la gaadhay ayaa ah.
Soo-saarisyada pop-up iyo modules ee kaamirooyinka sawir-qaadaha (selfie camera) ayaa dhaqso loo isticmaali doonaa
Bishii Juun ee sanadkii hore, Maamuus ayaa ku dhawaaqay taas horumarkan ayaa waxaa ka maqnaa shaqo badan oo horyaala ka hor inta aysan ku soo bixin qaar ka mid mobilada shirkadda. Si kastaba ha noqotee, wuxuu tixgeliyey in lagu guuleysan doono oo ay suurtagal tahay in mustaqbalka dhow waqtigaas ay ku faani doonaan qaar ka mid ah moobilada astaamaha, laakiin illaa iyo hadda ma aanan helin wax war ah oo ku saabsan shirkadda iyo shaqadeeda , taas oo muujineysa inay sii socon karto guuldaradeeda.
Macluumaad qarsoodi ah oo laga helay Xiaomi Wax yar ka hor sanad ka hor, wuxuu inoo muujiyey in kamaradda shaashadda ka hooseysa ay noqon karto mid la arki karo oo aan la arki karin markii la doonayo, wax si gaar ah u gaar ah oo la sharraxay iyada oo aan la helin faahfaahin weyn oo naga tagtay shaki badan oo ku saabsan sida tani dhab ahaantii u shaqeyn doonto.
Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la ogaado sida kuwa sameeya taleefannada casriga ahi ay u qabsan doonaan hal-abuurnimadan muddo yar ka dib, iyo sida "sawirrada aan la arki karin ee shaashadda" ay qaban doonaan. Rajada aan miiska saarnay waa badan tahay; wax yar kama filayno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Telefoonkii ugu horreeyay ee kamarad aan la soo bandhigin ayaa diyaar u ah in la soo saaro